I-Ocean Blue Chalet
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKathy
Eli khaya lihle le-chalet lijonge ulwandle kwaye linemibono yeentaba. Eli khaya linembono evulekileyo linamagumbi okulala amathathu kunye neebhafu ezimbini ezigcweleyo kwinqanaba eliphambili kwaye linendawo enkulu enombono othandekayo wolwandle. Ubushushu obukumgangatho osezantsi kunye neefestile ezijonge emazantsi zithetha ukuba indlu ihlala ipholile kwaye ishushu. Ibekwe kwindawo esembindini, le ndlu ikufutshane nevenkile yegrosari yasekhaya kunye nezinye izinto ezininzi ezinomtsalane ezahluka kwixesha lonyaka ukuya kwixesha.
Eli khaya livulekileyo linekhitshi elikhulu elinendawo eninzi yokubala, isitovu segesi, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Iifestile zegumbi lokuhlala zijonge ngaphezulu kolwandle kunye neentaba. Amagumbi okulala amabini aneebhedi zokumkanikazi kwaye elinye linamagumbi amabini. Ibhafu ye-en-suite idibanisa amagumbi amabini okulala kwaye inebhafu ye-jacuzzi kunye neshawari yokumisa yodwa. Kukho igumbi eliphezulu elinomgangatho ophezulu obonelela ngendawo yokulala eyongezelelweyo, ilungele abantwana.
Unyaka wonke abahlali bajikeleze indlu kwindlela ethule yelizwe.
Indlu iphuma nje kwiNdlela edumileyo yeCabot. I-Ingonish yindawo ephithizelayo yabakhenkethi ehlotyeni nasekwindla eneendawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile eziza kukunceda. Kodwa kuthe cwaka ebusika amashishini amaninzi avalwa ixesha lonyaka.
Ndinomphathi wepropathi kwindawo ekufutshane
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$793